Sarah Christien oo ah hogaamiye samafal iyo cimilo xilliyeed waxay u adeegi doontaa McKnight maareeyaha cusub ee barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest.
Qeybta:Ogaysiiska4 min akhris
Diyaar u ah in la ballaariyo Ballanqaadkeeda Cimilada, McKnight wuxuu ku dhawaaqay Agaasimaha Barnaamijka cusub
Cilmi-baaris cilmiyeed ayaa muddo dheer muujisay in dhibaatada cimilada ay u baahan tahay isbeddel baaxad leh oo lagu sameeyo dhaqaale si qoto-dheer loo xaddiday, taasoo la micno ah in qiiqa gaaska lagu sii daayo loo sii daayo heerar ka hortagi doona saameynta ugu xun ee meeraha kululaanaya. Midwest waxay leedahay door muhiim ah. Gobolku waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee hawada ka sifeeya kaarboonka Maraykanka, Mareykankuna waa midka ugu weyn adduunka. Qiijinta qiiqa ka baxa Midwest waxay adduunka u samayn doontaa isbeddel weyn.
Ka faa'iideysiga fursaddan hoggaamineed, hay'adda McKnight Foundation ayaa sii ballaarinaysa Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest (MC&E) barnaamijka si weyn. Mu'asasadu waxay labalaabi doontaa miisaaniyadeeda deeq-lacageedka labada sano ee soo socota si loo gaaro hadafkan: qaado tallaabo geesinimo leh dhibaatada cimilada adoo si aad ah u gooya wasakheynta kaarboonka ee bartamaha-galbeed 2030. Horaantii dayrta, aasaaska ayaa ku dhawaaqay oo bilaabay deeq-lacageedka iyada xeelado la cusbooneysiiyay, kuwaas oo ay ka mid yihiin wax ka beddelka nidaamka tamarta, koronto dhalinta gaadiidka iyo dhismayaasha, kaarboonka oo laga gooyo dhulalka shaqeeya, iyo xoojinta ka-qaybgalka dimuqraadiyadda.
"Waxaan qiyaaseynaa mustaqbal halkaasoo tamarta nadiifka ahi ay awood u siinayso guri kasta, ganacsi, iyo gaari kasta," ayuu yiri guddoomiyaha guddiga McKnight Debby Landesman. "Waxaanan qiyaasi karnaa bulshooyinka ku raaxeysanaya faa'iidooyinka tirada badan ee ku yimid isbeddellada noocaas ah - laga bilaabo hawo nadiif ah illaa shaqooyin tamar oo nadiif ah iyo dhaqaale kobcaya oo waara."
McKnight wuxuu soo dhaweynayaa Sarah Christiansen oo ah Agaasimaha Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest
McKnight wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo in Sarah Christiansen loo xushay inay u adeegto agaasimaha barnaamijka ee balaadhinta barnaamijka MC&E laga bilaabo 4ta Janaayo, 2021. Xirfadiisa in kabadan 30 sano, Christiansen waa hogaamiye samafal khibrad leh oo heegan u ah raadinta wadooyin badan oo lagu gaaro gaaritaanka. dhaqaale sinaan iyo kaarboon dhexdhexaad ah.
Christiansen wuxuu si dhow ula shaqeyn doonaa xubnaha guddiga McKnight iyo hogaamiyaasha sare si loo dhiso koox xirfad leh oo adeegsata aalad kasta oo samafal ah oo la heli karo si loo yareeyo wasakheynta kaarboonka ee gaadiidka, dhismooyinka, awooda, iyo qeybaha beeraha. McKnight wuxuu u mahadcelinayaa Brendon Slotterback oo u adeegay hoggaanka ku-meel-gaarka ah ee barnaamijka intii lagu jiray hawsha raadinta. Mu'asasadu waxay dhexda uga jirtaa raadinta laba sarkaal oo cusub oo barnaamijka barnaamijka MC&E ah.
Christiansen wuxuu u yimaadaa McKnight ka Mu'asasada Solidago ee Massachusetts, halkaas oo ay hadda u adeegto agaasime barnaamij. Waxay u keentaa khibrad istiraatiijiyado kala duwan oo cimilo ah, laga bilaabo habab ku saleysan meel loo dego xalka adduunka. Xusid ahaan, waxay u adeegtay sidii wakiilka maalgelinta Shirka Xisbiyada (COP), oo ah hay'adda ugu sareysa ee go'aan gaarista ee Qaramada Midoobay Qaabdhismeedka Isbedelka Cimilada. Doorkan, waxay si istiraatiiji ah u taageertay hoggaanka gudaha iyo dibedda COP iyada oo xireysa xalka aasaasiga ah ee cimilada u adkaysanaya xallinta qorshooyinka siyaasadeed ee magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah.
Istaraatiijiyad waxqabad leh, Christiansen waxay soo saartay faham qoto dheer oo ku saabsan kabaqyada badan ee looga baahan yahay wax ka qabashada isbedelka cimilada. Waxay isku xirtay Sanduuqa Cimilada iyo Nadaafadda Tamarta Nadaafadda, oo taageerta ka-qaybgalka bulshada, kobcinta awoodda siyaasadda sinnaanta cimilada, iyo isbeddelka sheekada, waxayna dhistaa awoodda bulshada inta badan saameynta ku yeelatay isbeddelka cimilada. Iyada oo la dhaqaajinayo codadka cusub ee bulshada ee isbahaysiga qaybaha oo dhan, dhaqdhaqaaqa cimilada ayaa noqota mid sifiican ugu taagan u doodista shaqooyinka tamarta nadiifka ah iyo maalgashiga. Laga soo bilaabo Virginia ilaa New Mexico ilaa Minnesota iyo wixii ka dambeeya, shaqada wada-hawlgalayaasheeda deeqaha bixiya ayaa horseeday guulo, ay ka mid tahay u dhaqaaqidda heerarka tamarta la cusbooneysiin karo ee tamarta, kordhinta waxtarka tamarta ee dhismayaasha dowladda hoose, iyo maalgelinta kaabayaasha u adkaysan kara cimilada, iyo sidoo kale dhammaystir kale waxaa laga wareejiyaa siyaasad-dejiyeyaasha dowladda iyo hoggaamiyeyaasha ganacsiga si loogu beddelo nidaam tamar tamar nadiif ah.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan la nimaadno qof hal abuur leh oo loo wada dhan yahay sida Sarah," ayay tiri Kara Inae Carlisle, madaxweyne ku xigeenka barnaamijyada. Waxay ku ballaarisay muraayadaha siyaabaha aan u dhisi karno garoon taageero ah oo loogu talagalay xallinta cimilada wax ku oolka ah. ”
Aqoonyahankii hore ee Fulbright ee Kameruun, Christianen wuxuu MS ku qaatey MS horumar iyo joogtayn bayoolaji oo ka socota Jaamacadda Maryland. Waxay u soo shaqeysay khabiir ku takhasusay ilaalinta deegaanka iyo sarkaalka barnaamijka ee Sanduuqa Duurjoogta Adduunka waxayna maamule ka tahay Breaking Wave, oo ah la-taliye madax-bannaan oo u adeegta aasaaska, shakhsiyaad deeq-bixiyeyaal ah, iyo la-taliyayaasha deeq-bixiyeyaasha ee istiraatiijiyadda cimilada iyo dimuqraadiyadda
Christiansen wuxuu ku koray Minnesota wuxuuna ka helay BS cilmiga deegaanka, horumarka, iyo dhaqanka Jaamacadda Minnesota. Waxay ahayd aqoonyahan dabiici ah iyo baraha deegaanka Eloise Butler Wildflower Garden & Bird Sanctuary ee magaalada Minneapolis bilowgeedii shaqadeeda waxayna rajeyneysaa inay ku laabato gobolkeedii hooyo.
McKnight wuxuu soo dhaweynayaa Ben Passer oo ah Sarkaalka Barnaamijka Sare ee Cimilada & Tamarta Sare
Ujeeddooyinka McKnight waxaa loogu talagalay in loogu beddelo Nidaamyada Tamarta ee Deeqaha Bixinta rubuca labaad
Wadaagista Gawaarida Korontada Oo Ka Bilaabaneysa Wadooyinka Minnesota